जीवनशैली - नेपाल
नेपाल संवाददाता , श्रावण १, २०७६
फेसन क्षणिक हुन सक्छ तर शैली अनन्तसम्म रहिरहन्छ । प्याजी रङको अनारकली पहिरनमा इच्छा कार्की स्टाइलिस देखिन्छिन् ।
नेपाल संवाददाता , असार ३०, २०७६
प्राकृतिक उज्यालो र रंगीन सेटिङ मन पर्छ भने तपाईंका लागि हुन सक्छ, डल्ले रेस्टुराँ । पिरो डल्ले खुर्सानीको नाममा रेस्टुराँ खोले पनि यहाँ परिकार भने स्वादिष्ट छन् । डल्लेको पनिर मःम विशेष खानाको रुपमा छ । त्यसैगरी मायोनिज ससको साथमा पोटाटो रोल, स्पाइसी आलुसँगको फ्राई राइस कम्बो तथा छोइला फ्राई राइस साथमा डल्ले खुर्सानीको अचार । बिहानको खाना होओस् या दिउँसोको खाजा, सबैका लागि उत्कृष्ट छ, डल्ले । काठमाडौँका विभिन्न ७ स्थानमा डल्लेका चेन छन् ।
नेपाल संवाददाता , असार २५, २०७६
तीनपुस्ते होनचाको शानै बेग्लै । छोयला, स्यः, यमरी, बारा, छ्याङ के खाने ? सबै पाइन्छ, तीनपुस्ते होनचामा ।
नेपाल संवाददाता , असार १७, २०७६
बच्चा होस् कि वृद्ध, महिला होस् कि पुरुष । सबैको रोजाइमा पर्छ, आइसक्रिम । स्ट्रबेरी, भेनिला, चकलेट । पहेँलो, सेतो, नीलो, हरियो, गुलाबी कुन रङको खाने ?
नेपाल संवाददाता , असार १०, २०७६
रातो चामलको भात, गहुँबाट बनेको चताम्पा सुप, पोर्क या बफको करी, भुटानी सेटमा । इच्छाअनुरुप खान सकिन्छ, लिटल टिबेट रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, ठमेलमा ।
नेपाल संवाददाता , असार ४, २०७६
चिनियाँ परिकार कत्तिको मन पर्छ ? गुलियो र अमिलो स्वादको मिश्रणमा बनेको बंगुरको मासु र सिचुवान सहरमा पाइने चिकेन ।
गोकर्ण गौतम, असार ३, २०७६
घरमा सबैले माया गरेर मोटी भन्दा कृशा श्रेष्ठ दंग पर्थिन् । कहिलेकाहीँ हिँडडुल गर्न असहज हुन्थ्यो, अल्छी लाग्थ्यो तैपनि आफ्नो मोटो शरीरसँग गुनासो थिएन, चिन्ता थिएन ।
कफी र किताब
नेपाल संवाददाता , जेष्ठ २९, २०७६
अंग्रेजी साहित्यका यी विख्यात हस्ती क्याफेमा कफी पिउँदै कविता र दर्शनमाथि चर्चा गर्थे । नेपालमा थुप्रै कफी हाउस खुलेका छन्, तर त्यसमध्ये हिमालय जाभा खास छ ।
नेपाल संवाददाता , जेष्ठ १९, २०७६
बाइरोडको बाटोमा धूलो उडाउँदै... गीत त सुन्नुभएकै होला ।
नेपाल संवाददाता , जेष्ठ १६, २०७६
उर्दू कहावत छ, जब कुनै महिला उर्दू बोल्छिन्, झन् सुन्दर देखिन्छिन् ।
संस्कृत श्लोक छ, अतिथि देवोः भव । अर्थात् पाहुना भनेका देवता हुन् ।